ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော် - ဆွစ်ဇာလန်၏ကမ္ဘာချီဘုရားကျောင်း
ယုံကြည်ခြင်းရှိသူတစ် ဦး ဖြစ်ချင်သလား။ တောင်များကိုရွေ့လျားစေနိုင်သောယုံကြည်ချက်တစ်ခုလိုချင်ပါသလား။ သေလွန်သူများကိုအသက်ပြန်ရှင်စေနိုင်သောယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုနှင့်partရာမလူသတ်သမားကိုသတ်ဖြတ်နိုင်သောဒါဝိဒ်ကဲ့သို့သောယုံကြည်ခြင်းမျိုးကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါသလော။ သင်၏ဘ ၀ ၌မင်းတို့ဖျက်ဆီးလိုသောကုမ္ပဏီကြီးများစွာရှိနိုင်သည်။ ငါအပါအ ၀ င်ခရစ်ယာန်အများစုနဲ့လည်းဒီလိုပဲ။ ယုံကြည်ခြင်းgရာမကြီးဖြစ်ချင်သလား။ သင်လုပ်နိုင်ပေမယ့်သင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
အစစ်အမှန်ကျေးဇူးတော်သက်ရောက်မှုများသည်အရှုပ်တော်ပုံဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးတော်သည်အပြစ်ကိုခွင့်မလွှတ်နိုင်သော်လည်းအပြစ်ကိုလက်ခံသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့မထိုက်တန်သောကျေးဇူးတော်၏သဘောသဘာဝဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာကိုပြောင်းလဲစေပြီးခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်းသည်ထိုအရာပင်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်နှင့်ထိတွေ့သူများစွာသည်သူတို့သည်တရားဥပဒေအောက်တွင်မရှိတော့မည်ကိုစိုးရိမ်ကြသည်။ သူတို့ကဒီအပြစ်ကသူတို့ကိုပိုပြီးအပြစ်ပြုလိမ့်မည်ဟုထင်ကြသည် ဒီအမြင်နဲ့ပေါလုဖြစ်လာခဲ့သည်
ထပ်ခါတလဲလဲ“ ဘုရားသခင်သည်ငါတို့ကိုဖြောင့်မတ်သည်ဟုယူမှတ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခရစ်တော်အားကြွေးတင်နေသည်ဟုရောမတွင်ပေါလုပြောဆိုခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တခါတရံအပြစ်ပြုသော်လည်း၊ ထိုအပြစ်များကိုခရစ်တော်နှင့်အတူလက်ဝါးကပ်တိုင်မှာအသေသတ်ခဲ့သောမိမိကိုယ်ကိုရည်ညွှန်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များသည်ခရစ်တော်၌ရှိသောအရာများနှင့်မကိုက်ညီပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြစ်တရားကိုတိုက်လှန်ရန်တာ ၀ န်ရှိသည်။ ကယ်တင်ခြင်းသို့မဟုတ်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်၏သားသမီးများဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အခန်း ၈ ၏နောက်ဆုံးအပိုင်းတွင်
ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာ Billy Joel ၏သီချင်း၊ State of Mind New York သည်ကျွန်ုပ်၏အွန်လိုင်းသတင်းများကိုကြည့်ရှုစဉ်နားထောင်နေစဉ်နောက်ဆောင်းပါးတွင်ကျွန်ုပ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ နယူးယောက်ပြည်နယ်သည်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များကိုထိုးခြင်းနှင့်ဖောက်ခြင်းကိုတားမြစ်သည့်ဥပဒေကိုမကြာသေးမီကထုတ်ပြန်ခဲ့သည်ဟုဖော်ပြထားသည်။ ဤကဲ့သို့သောဥပဒေသည်လိုအပ်ကြောင်းသိရသောအခါကျွန်ုပ်ဝမ်းသာခဲ့သည်။ ပုံဒီအလေ့အကျင့်တစ်ခုလမ်းကြောင်းသစ်ဖြစ်လာနေသည်။ ငါသံသယဖြစ်မိတယ်…
တီဗီကြော်ငြာတစ်ခုပါသောဗီဒီယိုတစ်ခုကိုမကြာသေးမီကငါတွေ့ခဲ့ရသည်။ ဤကိစ္စတွင်၎င်းသည် "It All About Me" ခေါင်းစဉ်တပ်ထားသောခရစ်ယာန်ဝတ်ပြုရေး CD အကြောင်းဖြစ်သည်။ ဒီစီဒီတွင်“ သခင်ဘုရားသည်ကျွန်ုပ်၏နာမကိုချီးမြှောက်တော်မူသည်”၊ “ ငါချီးမြှောက်ခြင်း” နှင့်“ ငါကဲ့သို့သောသူမရှိ” သီချင်းများပါ ၀ င်သည်။ (ဘယ်သူမှငါနဲ့မတူဘူး) ထူးဆန်း? ဟုတ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကဝမ်းနည်းဖွယ်အမှန်တရားကိုဖော်ပြသည်။ ငါတို့လူသားတွေ၊
ငါတို့က "စျေးပေါကျေးဇူးတော်" ဟောပြော?
သင်လည်း“ ကန့်သတ်ချက်မရှိသော” သို့မဟုတ်“ တောင်းဆိုမှုများကိုပြုလုပ်သည်” ဟူသောကျေးဇူးတော်နှင့်စပ်လျဉ်း။ သင်လည်းကြားဖူးပါလိမ့်မည်။ ဘုရားသခင့်မေတ္တာတော်နှင့်ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုအလေးအနက်ပြုသူများသည်တစ်ခါတစ်ရံ“ ဈေးပေါသောကျေးဇူးတော်” ကိုကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချ။ ခေါ်ဆိုနေသူဟုစွပ်စွဲသူများကိုရံဖန်ရံခါကြုံတွေ့ရလိမ့်မည်။ ဤသည်မှာကျွန်ုပ်၏မိတ်ဆွေကောင်းနှင့် GCI ဓမ္မဆရာ Tim Brassel နှင့်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ သူက "စျေးပေါကျေးဇူးတော်" ကိုဟောစွပ်စွဲခံခဲ့ရသည် ငါသူဘယ်လိုကြိုက်သလဲ ...
ကျေးဇူးတော်၌ အသက်ရှင်ခြင်းဆိုသည်မှာ ငြင်းပယ်ခြင်း၊ သည်းခံခြင်း သို့မဟုတ် အပြစ်ကို လက်ခံခြင်းတို့ကို ဆိုလိုသည်။ ဘုရားသခင်သည် အပြစ်ကို ဆန့်ကျင်သည် - မုန်းတီးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်ရှိသော အခြေအနေတွင် ကျွန်ုပ်တို့ကို ထားခဲ့ရန် ငြင်းဆိုခဲ့ပြီး ယင်းနှင့် ၎င်း၏ အကျိုးဆက်များမှ ကျွန်ုပ်တို့ကို ရွေးနှုတ်ရန် သားတော်ကို စေလွှတ်ခဲ့သည်။ ဖောက်ပြန်သောမိန်းမနှင့် ယေရှုက၊ “ငါသည် သင်တို့ကို အပြစ်မတင်ဘဲ၊ ယေရှုက သူ့အား မိန့်တော်မူ၏။ မင်းသွားလို့ရပေမယ့် အပြစ်မလုပ်နဲ့တော့!" (ယော 8,11 HFA). Jesu Aussage…
ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှပုံပြင်တစ်ပုဒ်သည်ကျွန်ုပ်ကိုအထူးစွဲမှတ်စေသည်။ အဓိကသရုပ်ဆောင်ကို Mefi-Boscheth လို့ခေါ်တယ်။ .သရေလအမျိုးသားတို့သည်ဖိလိတ္တိလူတို့ကိုတိုက်ခြင်းငှါချီ သွား၍၊ ဒီအထူးသဖြင့်အခြေအနေမှာသူတို့ရှုံးနိမ့်ခဲ့သည်။ သူတို့ဘုရင်ရှောလုနှင့်သားတော်ယောနသန်သေသည်။ သတင်းသည်မြို့တော်ဂျေရုဆလင်သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ဘုရင့်အသတ်ခံရလျှင်သူသည်သူ၏နန်းတွင်း၌ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်မှုနှင့်ပရမ်းပတာဖြစ်မှုများထွက်ပေါ်လာသည်။
ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်သည် ဖန်ဆင်းခြင်းအားလုံးအတွက် ဘုရားသခင်အလိုရှိတော်မူသော မထိုက်တန်သောကျေးဇူးတော်ဖြစ်သည်။ အကျယ်ပြန့်ဆုံးသဘောအရ၊ မြင့်မြတ်သောကိုယ်ကိုကိုယ်ဖွင့်ပြသည့် လုပ်ရပ်တိုင်းတွင် ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကို ဖော်ပြသည်။ ကျေးဇူးတော်ကြောင့် လူသားနှင့် စကြဝဠာတစ်ခုလုံးအား ယေရှုခရစ်အားဖြင့် အပြစ်နှင့်သေခြင်းမှ ရွေးနှုတ်ခြင်းခံရပြီး ကျေးဇူးတော်ကြောင့် လူသားသည် ဘုရားသခင်နှင့် ယေရှုခရစ်ကို သိကျွမ်းပြီး ချစ်ရန် တန်ခိုးကို ရရှိပြီး ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်၌ ထာဝရကယ်တင်ခြင်းသို့ ဝင်ရောက်ခြင်းအတွက် ရွှင်လန်းမှုရရှိစေသည်။ (ကောလောသဲ 1,20;…
ထိုအချိန်ကကျွန်ုပ်သည် ၁၂ နှစ်သာရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်၏ကျောင်းမှတ်တမ်းတွင် `` သူ 'များ (အကောင်းဆုံးအဆင့်) များအားလုံးကိုအိမ်သို့ယူဆောင်လာခဲ့သောကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုအလွန်အားရကျေနပ်နေသောအဖေနှင့်အဘိုးကိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမှတ်မိနိုင်သေးသည်။ ဆုတစ်ခုအနေနဲ့အဘိုးကကျွန်တော့်ကိုဈေးကြီးတဲ့မိကျောင်းသားရေပိုက်ဆံအိတ်ပေးခဲ့ပြီးအဖေကဒေါ်လာ ၁၀ ဒေါ်လာတန်သိုက်တစ်ခုအဖြစ်ပေးခဲ့တယ်။ ငါသူတို့နှစ် ဦး စလုံးသူတို့ကပြောသည်သတိရ ...
ကျွန်ုပ်တို့သည်ယေရှု၏သေခြင်းနှင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကျင်းပသည့်အချိန်အထိရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကျန်ရှိနေသေးသည်။ သခင်ယေရှုသေ။ ရှင်ပြန်ထမြောက်သောအခါကျွန်ုပ်တို့တွင်အဖြစ်အပျက်နှစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ပထမတစ်ခုမှာသူနှင့်အတူသေဆုံးခြင်းဖြစ်သည်။ ဒုတိယကကျွန်ုပ်တို့သူ့ကိုထမြောက်စေခြင်းဖြစ်သည်။ တမန်တော်ပေါလုကဤသို့ဆိုထားသည် -“ သင်တို့သည်ခရစ်တော်နှင့်အတူထမြောက်ကြသည်မှန်လျှင်၊ ဘုရားသခင်၏လက်ျာတော်ဘက်မှာခရစ်တော်သည်ထိုင်နေတော်မူရာအရပ်၌ရှိသောအထက်အရာတို့ကိုရှာကြာလော့။ အထက်အရာတို့ကိုသာစိတ်စွဲလမ်းခြင်းရှိကြလော့။
စိတ်ပညာရှင်လောရင့်ကိုလက်ဘာ့ဂ်သည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှုနယ်ပယ်၌ရင့်ကျက်မှုကိုတိုင်းတာရန်ကျယ်ပြန့်သောစမ်းသပ်မှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သူကကောက်ချက်ချခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်ကောင်းသောအပြုအမူသည်မှန်ကန်ရာကိုလုပ်ဆောင်ရန်အနိမ့်ဆုံးသောလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်သည်ဟုသူကောက်ချက်ချခဲ့သည်။ ပြစ်ဒဏ်မှရှောင်ရှားရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြုအမူကိုပြောင်းလဲရုံလား။ ဤသည်မှာခရစ်ယာန်နောင်တရသလော။ ခရစ်ယာန်ဘာသာသည်ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်နည်းလမ်းများစွာထဲကတစ်ခုလား။ ခရစ်ယာန်များစွာ ...
ခရစ်ယာန်အများစုသည် the ၀ ံဂေလိတရားကိုမယုံကြည်ကြပါ။ ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းမွန်သောအသက်တာမှရရှိသော်သာလျှင်ကယ်တင်ခြင်းကိုရနိုင်သည်ဟုသူတို့ထင်ကြသည်။ "မင်းဘဝမှာဘာမှအခမဲ့မရဘူး။ " “ တကယ်လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ရင်အဲဒါလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။ ” ဒီလူသိများတဲ့ဘဝရဲ့ဖြစ်ရပ်မှန်များကိုကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံများမှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး ချင်းစီကိုထပ်ခါထပ်ခါနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းနေကြသည်။ သို့သော်ခရစ်ယာန်သတင်းတရားသည်၎င်းနှင့်ဆန့်ကျင်သည်။ The …
ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်သမ္မာကျမ်းစာကိုနှစ်ပေါင်းများစွာဖတ်ရှုခဲ့ကြသည်။ အကျွမ်းတ ၀ င်အခန်းငယ်များကိုဖတ်ရှုပြီးနွေးထွေးသောစောင်တစ်ထည်ကဲ့သို့ဖတ်ရှုခြင်းသည်ကောင်း၏။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုကကျွန်ုပ်တို့အားအရေးကြီးသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုလျစ်လျူရှုမိစေနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုပွင့်လင်းသောမျက်လုံးများနှင့်ရှုထောင့်သစ်ဖြင့်ဖတ်ပါကသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားပိုမိုသိရှိရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့မေ့လျော့သောအရာများကိုမှတ်မိရန်ခွင့်ပြုနိုင်သည်။ ငါ…
လမ်းကြောင်းအားလုံးဘုရားသခင်ဆီသို့ပို့ဆောင်ပါသလား။ အချို့ကဘာသာတရားအားလုံးသည်တူညီသောအယူအဆတစ်ခုအပေါ်တွင်မူတည်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ ၎င်းကိုပြုလုပ်သည်သို့မဟုတ်ကောင်းကင်သို့သွားသည်။ ပထမ ဦး ဆုံးမျက်မှောက်မှာဒါပုံရသည်။ ဟိန္ဒူဘာသာသည်ယုံကြည်သူအားစည်းလုံးမှုမရှိသောဘုရားသခင်နှင့်စည်းလုံးစေသည်။ နိဗ္ဗာန်သို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းသည်တစ်ဖန်ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်းအားဖြင့်ကောင်းသောအကျင့်ဖြစ်သည်။ နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းကတိပေးထားသောဗုဒ္ဓဘာသာသည်အရိယာတို့၏အမှန်တရားလေးပါးနှင့်ရှစ်ဆသောလမ်းကိုလျှောက်လှမ်းရန်တောင်းဆိုထားသည်
တာမီနဲ့ကျွန်တော်လေယာဉ်ကွင်းကိုစောင့်နေတုန်းအိမ်ကိုမကြာခင်လေယာဉ်စီးဖို့ရောက်လာကြတယ်၊ ထိုင်ခုံ ၂ ခုအကွာမှာထိုင်နေပြီးကျွန်တော့်ကိုထပ်ခါထပ်ခါကြည့်နေတဲ့လူငယ်တစ်ယောက်ကိုသတိထားမိတယ်။ မိနစ်အနည်းငယ်ကြာပြီးနောက်သူက“ မင်းကိုမင်းက Mr. Joseph Tkach လား?” ဟုမေးခဲ့သည်။ သူသည်ကျွန်ုပ်နှင့်စကားစမြည်ပြောပြီးသူသည်မကြာသေးမီက Sabbatarian အသင်းတော်မှနှင်ထုတ်ခံခဲ့ရသည်ဟုပြောခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားပြောဆိုမှုမှာသွား၏
သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်အရေးကြီးသောဖိုင်တစ်ခုကိုသင်ဆုံးရှုံးဖူးပါသလား။ ၎င်းသည်မငြိမ်သက်နိုင်သော်လည်းကွန်ပျူတာများနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သူအများစုသည်ပျောက်ဆုံးနေသောပုံရိပ်ကိုအောင်မြင်စွာပြန်လည်ရယူနိုင်သည်။ သင်မတော်တဆဖျက်မိသည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုကြိုးစားရှာဖွေသည့်အခါအားလုံးဆုံးရှုံးခြင်းမရှိကြောင်းသိရခြင်းကတကယ်ကောင်းပါသည်။ သို့သော်သင်လုပ်ရန်ကြိုးစားသောအခါနှစ်သိမ့်မှု မှလွဲ၍ ဘာမှမ ...
ကယ်တင်ခြင်းခံရခြင်းသည် အမှန်တကယ်ပင် သန့်ရှင်းသောကျေးဇူးတော်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်က မင်းကို ပေးတဲ့အရာကို ယုံကြည်ဖို့ကလွဲလို့ မင်းကိုယ်မင်း လုပ်နိုင်တာ ဘာမှမရှိဘူး။ ဘာတစ်ခုမှလုပ်လို့ မထိုက်တန်ဘူး။ အကြောင်းမူကား၊ ဘုရားသခင်သည် မိမိရှေ့တော်၌ မိမိအောင်မြင်မှုများကို အဘယ်သူမျှမရည်ညွှန်းနိုင်စေလိုပါ။ (ဧဖက် 2,8-9 GN)။ ကျွန်ုပ်တို့ ခရစ်ယာန်များသည် ကျေးဇူးတရားကို နားလည်ရန် သင်ယူသောအခါ အလွန်အံ့သြစရာကောင်းသည်! အဲဒါက ငါတို့ကို...
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျေးဇူးတော်အပေါ်အလွန်အကျွံအလေးထားနေခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကိုတစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်ကြားရသည်။ ကျေးဇူးတော်ဆုံးမtoဝါဒနှင့်ယှဉ်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျမ်းစာနှင့်အထူးသဖြင့်ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင်ဖော်ပြထားသောနာခံခြင်း၊ "များလွန်းသောကျေးဇူးတော်" နှင့်ပတ်သက်သောမည်သူမဆိုတရားဝင်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိသည် ...
ကျွန်ုပ်တို့သည်ခရစ်ယာန်များအနေဖြင့်ယုံကြည်ရသည့်အခက်ခဲဆုံးသောအရာများထဲမှတစ်ခုမှာဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်အားလုံးကိုခွင့်လွှတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သီအိုရီမှန်ကန်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိသော်လည်းနေ့စဉ်လက်တွေ့အခြေအနေများနှင့်ပတ်သက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကမပြုလုပ်ခဲ့သကဲ့သို့ပြုမူကြသည်။ ဖယောင်းတိုင်မှုတ်သောအခါကျွန်ုပ်တို့ခွင့်လွှတ်သောအခါကျွန်ုပ်တို့ပြုသကဲ့သို့အလားတူပြုမူကြသည်။ သူတို့ကိုမှုတ်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါငါတို့ဘယ်လောက်အထိအလေးအနက်မထားကြိုးစားဘဲဖယောင်းတိုင်တွေပေါ်လာတယ်။ ဒီဖယောင်းတိုင် ...
လူတိုင်းတွင်အမှားအမှန်နှင့်ဆိုင်သောအကြံဥာဏ်ရှိကြသည်။ လူတိုင်းအမှားတစ်ခုခုပြုလုပ်မိကြသည်။ “ အမှားပြုမိခြင်းသည်လူသားဖြစ်သည်” ဟုလူသိများသောနယပုံပြင်ကဆိုသည်။ လူတိုင်းဟာတစ်ချိန်ချိန်မှာသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကိုစိတ်ပျက်စေတယ်၊ ​​ကတိတစ်ခုကိုချိုးဖောက်ပြီးတစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ခံစားချက်ကိုထိခိုက်စေတယ်။ လူတိုင်းအပြစ်ရှိတယ်ဆိုတာသိတယ်။ ဒါကြောင့်လူတွေဟာဘုရားသခင်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။ သူတို့ဟာမသန့်ရှင်းဘူးဆိုတာသိလို့တရားစီရင်ရာနေ့ကိုမလိုချင်ဘူး။